नयाँ दिल्लीमा फैलिएको विषाक्त वायु काठमाडौ आउँला त ? - Wash Khabar
नयाँ दिल्लीमा फैलिएको विषाक्त वायु काठमाडौ आउँला त ?
काठमाडौ : प्रदूषणका कारण भारतको नयाँदिल्ली र आसपास क्षेत्रको आकाश दुई दिनदेखि धुम्मिएको छ । विषाक्त वायु फैलिएको भन्दै भारत सरकारले विद्यालय बन्द गर्नुका साथै लाखौंको संख्यामा मास्क वितरण गरेको छ ।
त्यही विषाक्त वायुको प्रभाव नेपालसम्मै पर्न सक्ने हल्ला चलिरहेका बेला नेपालका मौसमविद्ले अहिल्यै दिल्लीको असर यहाँसम्म नआउने बताएका छन् । ‘पश्चिम वायुको प्रभाव भारतको उत्तर–पश्चिम भूभागको लिपुलेक हुँदै नेपालको पश्चिम भूभागतिर पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् मीनकुमार अर्यालले बताए । तर विषाक्त वायु फैलिएको भारतको नयाँदिल्ली नेपालबाट दक्षिण–पश्चिममा पर्छ ।
‘दक्षिण–पश्चिम दिशा भएर वायुको कुनै प्रभाव नेपाल भित्रिँदैन,’ अर्यालले भने, ‘मौसममा फेरबदल निम्त्याउने ‘पश्चिमी वायु’ उत्तर–पश्चिमको उच्च पहाडी र हिमाली भाग हुँदै आउने हो । त्यसैले दिल्लीमा देखिएको प्रदूषण भित्रिने संकेत देखिन्न ।’
शनिबारको तुलनामा आइतबार बिहानैदेखि नेपालको आकाश पनि धुम्मिएको छ । त्यसैले बदली भएको हो । बादल लागेकाले राजधानीवासीले समेत चिसोको अनुभव गरे । ‘पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावले नेपालमा बदली भएको हो,’ उनले भने, ‘सोमबारदेखि मौसममा सुधार आउँछ ।’ भारतको जम्मु–कश्मीर हुँदै भित्रिएको पश्चिमी वायुको प्रभावले पश्चिमी उच्च भागमा सामान्य हिमपात र छिटफुट वर्षा हुने सम्भावना छ । महाशाखाले बुलेटिनमा भनेको छ, ‘पहाडी भागमा आंशिक बदली भए पनि अन्यत्र मौसम सफा रहनेछ ।’
पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिए पनि राजधानीको ‘भिजिबिलिटी’ नघटेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
‘भारतमा जस्तो भिजिबिलिटी घटेको पनि छैन,’ अर्यालले भने, ‘बिहानको समयमा ४–५ किलोमिटर छ । यो गत वर्षको जत्तिकै हो । बिहानको समयमा सामान्य तुवाँलो लागेको मात्र हो ।’
सन् १९९८ पछिका वर्षमा भारतबाट बाक्लो हुस्सु नेपालतिर आउने क्रम बढेको अर्का मौसमविद् बरुण पौडेलले बताए । ‘तर त्यस्तो हुस्सु पनि राजस्थान, लखनऊ, उत्तरप्रदेश हुँदै भित्रिने हो,’ उनले भने, ‘अहिले भारतमा देखिएको प्रदूषणका कण यहाँसम्म ल्याउने कुनै वायुको प्रणाली देखिन्न, त्यही भएर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’
डेढ वर्षअघि भारतको राजस्थान, लखनऊ, उत्तरप्रदेशमा फैलिएको धुले आँधी (डस्ट स्ट्रम) का कण नेपालको वायुमण्डलसम्मै छरिएका थिए । त्यसपछि धमिलो वर्षा भएकोथियो । यस पटक दिल्लीका कण उडाएर ल्याउने मौसमी प्रणाली नदेखिएकाले चिन्ता नलिन मौसमविद्हरूको आग्रह छ ।
विगतमा पनि हिउँदयाममा धूलोधूवाँ बढी आउँदा नेपाली वायुमण्डल दिउँसै अँध्यारो हुने गरेको थियो । दिल्ली र आसपासका क्षेत्रका कलकारखाना, अत्यधिक सवारीसाधनका अतिरिक्त पन्जाब र हरियाणाका खेतमा पराल जलाएका कारण प्रदूषण यो हदसम्म बढेको अनुमान गरिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
विभिन्न सरकारी तथ्यांकले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा प्रदूषण यो हदसम्म बढ्नुमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान पन्जाब र हरियाणाका खेतमा जलाइएको परालको धूवाँ रहेको देखाएको छ ।